Telefishanka beIN Sports Oo Shaaciyey Wariyeyaasha Tabinaya Kulamada Champions League - Yaa Qabanaya Real vs Chelsea & PSG vs Man City - Laacib
HomeWararka Champions LeagueTelefishanka beIN Sports Oo Shaaciyey Wariyeyaasha Tabinaya Kulamada Champions League – Yaa Qabanaya Real vs Chelsea & PSG vs Man City
Telefishanka beIN Sports Oo Shaaciyey Wariyeyaasha Tabinaya Kulamada Champions League – Yaa Qabanaya Real vs Chelsea & PSG vs Man City
Telefishanka beIN Sports ayaa soo saaray jadwalka shaqo ee wariyeyaasha luuqadda Carabiga ku tabinaya kulamada horyaalka naadiyada Yurub ee Champions League oo wareegga semi-finalka ay lugtiisa hore caawa iyo habeen dambe qabsoomayaan.
Real Madrid ayaa caawa garoonkeeda Alfredo Di Stefano ku martigelinaysa Chelsea, waxaanay ciyaartani tahay mid adag oo kusoo beegantay waqti ay qaab-ciyaareed fiican ku jiraan labada kooxood.
Ciyaartan oo telefishanka beIN Sports uu ku tabinayo luuqado kala duwan, waxa aan joogin wariyeyaashii inta badan ay Soomaalidu xiisayso ee Cusaam Shuwaali iyo Rauf Khaliif oo codkooda cajiibka ah ku macaneeya ciyaarta, xiise gaar ahna u yeela kulamada.
Kulankan ayaa loo doortay in uu qabto wariye Xafiid Daraji oo ka mid ah wariyeyaasha ugu wanaagsan ee kusoo xiga labada sare, waxaanay daawadeyaasha Af-carabiga jecel ay ciyaartan ku maqli doonaan codkiisa, haddii aanay wax kale dhicin oo aanu isbeddel qasab ahi imanin.
Wariyahan ayaa labadii maalmood ee ugu dambeeyey urursanayay xogta labada kooxood, kulamadii hore ay u ciyaareen iyo xataa rikoodhada koox waliba haysato ee uu ku xiise gelin karayo daawadeyaasha.
Ciyaarta xigta ee habeen dambe ay PSG ku qaabbilayso Manchester City oo ka dhici doonta garoonka Parc des Princes, waxa aan mar kale joogin Cusaam iyo Rauf oo aan shaqada ku qornayn, waxaana ciyaartan loo doortay Jawad Bahah.